Shina: Sary Maneho ny Fijalian’ireo “Ankizy 58 Tapitrisa Nilaozana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Aogositra 2017 8:10 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Italiano, русский, Español, Français, Svenska, Aymara, македонски, Ελληνικά, Português, English
Hazavain'ilay mpanao fanadihadiana amina haino aman-jery, Yanlong, amin'ny antsipirihiny [zh] ny ilàna ny fanavaozana ny fiahiana ara-tsosialy :
Asongadin'ilay mpanangom-baovao, Fu Jianfeng [zh], ny fitanisàna ny tenin'ilay mpampianatra momba ilay ampahan-tantara tao an-dakilasy ao anatin'ilay lahatsary :
Nikiakiaka mafy ilay ankizy : ” Halako ny lohataona.” Nanontanian'ilay mpampiantra azy ny antony. ” Rehefa lohataona, tsy maintsy mandeha miasa ny ray aman-dreniniko. Tsy miverina ry zareo raha tsy ririnina”, hoy izy. Resaka niseho tao amin'ilay tanànan'ny ” Te-hatory ilay anadahikely” izany. Nanganohano aho nijery ilay lahatsary. Izany no manjo ireo ankizy 58 tapitrisa nilaozana. Tsy maintsy fenoin'ny fiarahamonina sy ny firenena ny banga amin-dry zareo.